Dawlada iyo AMISOM oo la wareegay Biya Cade Sh/dhexe & Al shabaab oo guulo sheegtay – Biyacade
awlada iyo AMISOM oo la wareegay Biya Cade Sh/dhexe & Al shabaab oo guulo sheegtay
Jowhar–KNN–Iyadoo dagaal maanta uu ku dhexmaray deegaanka Biyo cadde oo duleedka Jowhar ku yaalla ciidamada dawlada oo AMISOM la socdeen iyo Al shabaab ayaa waxa soo baxaya warar cusub.
Dagaalka ayaa soo gaba-gaboobay sida ay Dawlada Somaliya saraakiil uhadashana ay sheegeen waxa deegaanka Biya cade la wareegay Dawlada iyo AMISOM.
Taliye katirsan ciidamada Dawlada oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Xuseen Garabeey ayaa usheegay warbaahinta Afka Dawlada ku hadasha inay gacanta ku hayaan deegaankii maanta lagu dagaalay.
Biyo-Cade ayaa ujira xarunta gobolka Shabellaha dhexe qiyaastii 26-km waxaana maamulayey mudooyinkii udambeeyey Al Shabaab waxaana deegaanka lagala wareegay uu ka dhigan yahay meeshii labaad oo muddo todobaad gudihiis ah in Shabaab ay waayeen iyadoo Mahadaay laga qabsaday dhawaan.
War ay Shabaab soo daabaceen galabta ayey guulo ka sheegteen dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Biya cade iyagoo sheegay inay gaari nuuca dagaalka ahaana ay gubeen.
Previous Xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay Burkina Faso iyo dad careysan oo gubay Baarlamaanka dalkaas
Next Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda oo u kicitimay New York (WARSAXAAFADEED)